January 25, 2021 - ApannPyay Media
ဆီပူ၊ မီးပူလောင်လျှင် အမာရွတ်မရှိအောင် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ
January 25, 2021 by ApannPyay Media
ဆီပူ၊ မီးပူလောင်လျှင် အမာရွတ်မရှိအောင် ဖြေရှင်းနည်းလေးများ ခံရခက််သော အပူလောင်် ဒဏ်ရာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့်် နည်းလမ်း ၅ ခု အပူလောင်ခြင််းဟာ အဖြစ်များတဲ့ မတော်တဆမှု တခုဖြစ်ပြီး ကြီးကြီးမားမား အပူလောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် အိမ်မှာ အလွယ်တကူရှိတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့တင် သက်သာပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိို့လို့ အပူလောင် ဒဏ်ရာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် အိိမ်တွင်း သဘာဝကုထုံး နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးလိိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆီီပူလောင်တာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်် ပူနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတခုခုနဲ့ ကပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ််၊ အပူလောင်သွားတဲ့ အရေပြားနေရာပေါ်ကို ရေခဲရေနဲ့ လောင်းပေးပြီး အိမ်မှာ အလွယ်တကူရှိတဲ့ သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်ကို ပွတ်လိမ်း ပေးထားခြင်းအားဖြင့် အပူလောင်ခြင်းကြောင့် အရည်ကြည်ဖုထခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ (၂) ပျားရည်ဟာ အသေးစား အပူလောင်ဒဏ်ရာတွေအတွက်် အသင့်တော်ဆုံး … Read more
တစ်ရက်ကို 4မိနစ်သာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး 5လအတွင်း 8-Pack Abs ရအောင်လုပ်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးသား
တစ်ရက်ကို 4မိနစ်သာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး 5လအတွင်း 8-Pack Abs ရအောင်လုပ်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးသား ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုရရှိဖို့ဟာ အမှန်တကယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး ။သို့ပေမဲ့လည်း ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ် ။ August 25ရက်နေ့မှာတော့ သူ့ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ 5လအတွင်း တစ်ရက်ကို4မိနစ်သာပြုလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကို သူ၏Twitter စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။Hiragii Sensei အမည်ရှိအဆိုပါအမျိုးသားဟာ သူ၏မပြောင်းလဲခင်ကဓာတ်ပုံနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ပြောင်လဲသွားသော ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ် ။အဆိုပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို မတ်လမှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Augustလ မှာသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အရင်ချိန်တုန်းက တော်တော်လေးကိုဝဖောင်းနေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း 5လအတွင်း ကြိုးစားခဲ့ရုံဖြင့် ယခုချိန်မှာတော့ ကျစ်လစ်တဲ့ 8 Pack abs ဝမ်းဗိုက်မျိုးပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပါပြီ ။ အဆိုပါအမျိုးသား ရေးသားထားခဲ့တာကတော့ ” ဒီလိုပြင်ထန်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို ကျွန်တော့်အိမ်မှာပဲလုပ်ပြီး … Read more
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖတ်ကြည့်နော် လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် . . .ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို သိထားရပါမယ်။ နောက်ပြောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာမုသားပြောဆိုခြင်းနဲ့ ကလိမ်ကျခြင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ လုပ်မိသွားရင်တော့ သင့်ကို လိမ်ညာပြောတတ်သူလို့ သူ အမြဲသတ်မှတ်နေပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖဝါးမှာ … Read more
ရေနွေးကြမ်းလိုသောက်ပေးရုံနဲ့ ညှော်မန်းနဲ့အခြားမန်းတွေ ပျောက်ကင်းနိုင်
ရေနွေးကြမ်းလိုသောက်ပေးရုံနဲ့ ညှော်မန်းနဲ့အခြားမန်းတွေ ပျောက်ကင်းနိုင် ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မုန့်လုပ်ရောင်းတာ ရနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့မုန့်လုပ်ရတဲ့သူတွေဟာ ညော်အင်မတန်မှရှုရှိုက်ရသောကြောင့် ခါးနာ၊ ဝမ်းချုပ်၊ မန်းကြောင့်ဖြစ်သော ဖောရောင်၊ လျှာထုံခြင်း၊မိန်းပြီးအိပ်ချင်ခြင်း၊အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယခင်ကမန်းဆေးအမျိုးမျိုးသောက်ဖူးပါသည်။မန်းအားကြီးလျှင် မန်းဆေးပါထိုးယူရပါသည်။ ယခုအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဒေသထွက် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း၊တောတောင်အတွင်းမှ ရရှိသော ဝံအူမြှစ်ကို ကျို၍ ဓာတ်ဗူးအတွင်းတွင် ရေနွေးကြမ်းသောက်သလို သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ညော်မန်းနှင့် အခြားမန်းအားလုံး ပျောက်ကင်းသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်သောက်သလိုသောက်ပေးမယ်ဆို ညော်မန်းများမဖြစ်ပေါ်နိူင်တော့ပါ။ ဗိုက်ခွဲ၍ ခလေးမွေးရသော အမျိုးသမီးများလည်း မန်းဆေးအဖြစ်သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှ မည်သည့်မြို့ကိုမဆို ကားတင်ပေးပါသည်။ 09-457328488 ၅စီးကို ၂ဝဝဝကျပ်။ ေရေႏြးၾကမ္းလိုေသာက္ေပးရံုနဲ႔ ေညွာ္မန္းနဲ႔အျခားမန္းေတြ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ ကၽြန္ေတာ္လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး မုန္႔လုပ္ေရာင္းတာ ၇ႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မုန္႔လုပ္ရတဲ့သူေတြဟာ ေညာ္အင္မတန္မွရႈရွိုက္ရေသာေၾကာင့္ ခါးနာ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ မန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဖာေရာင္၊ လၽွာထုံျခင္း၊မိန္းၿပီးအိပ္ခ်င္ျခင္း၊အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယခင္ကမန္းေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ဖူးပါသည္။မန္းအားႀကီးလၽွင္ … Read more
ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် ဆံပင်အရှည်နှေးနေလို့ စိတ်ညစ်နေရရင် ဆံကေသာဆိုတာ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေအတွက်တော့ ဒုတိယမျက်နှာပါပဲ။ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် ဆံပင်အရှည်နှေးနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်ထိတွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ၊ စားသုံးနေတဲ့အစားအသောက်တွေဟာ ဆံကေသာကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဆံပင်အရှည်နှေးနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ဆံပင် တိဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်ရင်တော့ ဆံပင်တိဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ၃ လ ၄ လကိုတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို မဖြစ်မနေတိပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ဆံဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာကို သက်သာစေပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေမှာပါ။ ၂။ ရေနွေးပူပူနဲ့ ခေါင်းမလျှော်ပါနဲ့။ ခေါင်းကို ရေအေးနဲ့ပဲလျှော်ပေးပါ။ ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်တာဟာ ဆံပင်ကျွတ်စေပါတယ်။ ၃။ ရေများများသောက်ပါ။ မနက်မိုးလင်းတိုင်း … Read more
January 25, 2021 January 25, 2021 by ApannPyay Media
ရွှေလယ်တောကဆေး(သရက်ကင်းဥ) သရက်ကင်းဥကရွှေလယ်တောမှဦးကြီးများကပါးပါးလှီးပြီးငါးကင်ပုဇွန်ခြောက်တို့နဲ့သုပ်စားလေ့ရှိတဲ့အပင်ရဲ့ဥဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့အလွန်တွဲဖက်ညီတဲ့အမြီးသုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြီးတွေရဲ့အိမ်ရှင်မများကပုဇွန်ကင်၊ငါးကင်တို့နဲ့သရက်ကင်းဥကိုကြော်စားငါးပိရည်နဲ့တို့စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ဒီလိုစားပေးတော့ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်မဖြစ်စေပဲချွေးတစိုစိုနဲ့ကျန်းမာစေပါတယ်ကျားနနွင်း၊မုန်နဖူးပင်တို့နဲ့ဆင်ဆင်တူပေမယ့်အရွက်၊ပင်လုံးပင်စည်၊ကပိုကြီးပြီးဥတက်တွေကသေးငယ်ပါတယ်။ဖြူဝါရောင်ဥတက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သရက်သီးကင်းနံ့နဲ့တူလို့”သရက်ကင်းဥပင်”လို့ခေါ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပေါက်ရောက်ပါတယ်ရုက္ခဗေဒအမည်နဲ့ Curcuma Amada လို့ခေါ်ပါတယ်။Mango Gingerလို့လဲခေါ်ပါတယ်။ဂျင်းမျိုးရင်းမှာပါဝင်ပြီးနနွင်းနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားနဲ့မှိုများကိုနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။အချဉ်တည်ခြင်း၊သနပ်လုပ်စားခြင်း၊အတို့အမြုပ်လုပ်စားခြင်း၊ဆေးအဖြစ်ဖော်စပ်ပြီးလည်းသုံးစွဲကြပါတယ်။ အေး၊ခါး၊ဖန်အနည်းငယ်စပ်အရသာရှိပါတယ်။သွေးနဲ့အဆိပ်သင့်ခြင်းကိုနိုင်ပါတယ်။သုက်ဓာတ်ပွားစေပါတယ်။ဝမ်းမီးတောက်အစာကြေစေပါတယ်။မလအညစ်အကြေးများကိုစွန့်ထုတ်ပေးပါတယ်။သလိပ်နာ၊ချောင်းဆိုးရင်ကြပ်၊ပန်းနာ၊အဖျား၊ထိခိုက်ဒဏ်နာရောင်ရမ်းခြင်း၊လေနာရင်ဘတ်နာ၊ဆီးကျောက်တည်ရောဂါ၊ဆီးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ယားနာတွေပျောက်စေပါတယ်သရက်ကင်းဥရင့်ရင့်ကိုသကြားသင့်ရုံနဲ့ပြုတ်သောက်ပါကသွေးဝမ်းရောဂါ၊ထုံကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ရောဂါ၊ကိုယ်လက်တောင့်တင်းခြင်း၊ဆီးကြောတင်းခြင်း၊အစားပျက်ခြင်း၊လေအောင့်ခြင်း၊နှလုံးမငြိမ်တဲ့ရောဂါ၊မူးဝေထှိုင်းမှိုင်းတဲ့ရောဂါတွေပျောက်ပါတယ် ထိခိုက်ဒဏ်နာအတွင်းကြေဒဏ်နာတွေမှာသရက်ကင်းဥ၊ထုံးနဲနဲ၊နနွင်းနဲနဲကြိတ်ပြီးအုံဆေးအဖြစ်အဝတ်နဲ့စည်းထားပါကအမြန်ပျောက်စေပါတယ်ဒီအုံဆေးကိုပဲအမျိုးသမီးများနို့ချောင်းပိတ်၊နို့နာတွေကိုအုံလိမ်းပေးပါကလည်းပျောက်စေပါတယ်(ကျန်းမာချမ်းသာပြည့်ဝပါစေ…..)ဆေးပင်တွေအကြောင်းအရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီလိုနေ့နာမ်အလိုက်ဆေးပင်လေးတွေအကြောင်းတင်ပြပေးသွားမယ့်MINGALAR HERBAL TALK အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်တင်ပြပေးသွားမှာပါသောကြာနေ့ ဆိုသောကြာနာမ်ဆေးပင်အကြောင်းတင်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီအစီအစဉ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်Likeလုပ်ပေးပြီးCommentမှာYesလေးရိုက်ပေးပါ။တခြားသူများကိုလည်းမျှဝေပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သိလိုတဲ့နေ့နာမ်အလိုက်ဆေးပင်လေးတွေလည်းcommentမှာမေးထားလို့ရပါတယ်။အမေးများတဲ့ဆေးပင်ကိုဦးစားပေးတင်ပြပေးပါမယ်တင်ပြပေးထားတဲ့ဆေးပင်အကြောင်းမိတ်ဆွေတို့သိထားတာတွေလည်းcomment မှာမျှဝေရေးသားသွားလို့ရပါတယ်။မနက်ဖြန်စနေနေ့အတွက်သိချင်တဲ့(တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န)စတဲ့စနေနေ့နာမ်ထဲကဆေးပင်ရှိရင်လည်းမေးထားလို့ရပါတယ်နော ဆရာရဲ(မင်္ဂလာတိုင်းရင်းဆေး) စျေးကြီးကြီးမရောင်းဘူးဘယ်တော့မှမသုံးပါဘူး မိဿလင်ကြပ်ထုပ်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေ-….အဆစ်နာအဆစ်ရောင် ၊လက်ကပ် ၊ဒူးနာ၊ခါးနာ၊ ကြွက်သားတောင့်တင်းကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း ထုံနာကျင်နာ၊ လေးဘက်နာ၊ ကျီးပေါင်းရောဂါ၊ နာတာရှည်လေငန်းရောဂါ အရိုးပိုင်းလှုပ်ရှားမှုချို့ယွင်းသူများ၊ကိုယ်လက်ညောင်းညာကိုက်ခဲနာကျင်သူ၊လေဖြတ်လေငန်းရောဂါ၊အားကစားသမားများနဲ့ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေချိန် မှာ အကြောပြေ လန်းဆန်းစေဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိဿလင်ကြပ်ထုပ်(၂)ခု၊ကြပ်ထုပ်ဆီတစ်ဘူးပါတဲ့ မိသားစုသုံးတစ်ဘူး စျေးနှုန်း 4000ပါ။အိမ်မှာပဲသုံးသုံး လက်ဆောင်ပဲပေးပေး လိုသလိုသုံးလို့ရအောင်အလှစက္ကူဘူးပုံစံနဲ့ပလပ်စတစ်အကြည်ဘူးပုံစံဆိုပြီးပုံစံ(၂)မျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။စျေးနှုန်းကအတူတူပါပဲ။မှာယူလိုပါကChat Boxနှင်Hot Line-095018457 မှလည်းမှာယူနိုင်ပါတယ်။ဆေးရောက်မှငွေချေစနစ်(Cash-On-Delivery)နဲ့စာတိုက်မှပို့ပေးပါတယ်။ ဆရာရဲ(မင်္ဂလာတိုင်းရင်းဆေး) 103,(3)လမ်းနှင့်(6)လမ်းထောင့်(8)ရပ်ကွက်,တောင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုံ,ရန်ကုန်မြို့W(10),လမ်း(70),29×30လမ်းကြား,ဗထူးကွင်းအရှေ့ဘက်,ရုံးကြီးတိုက်တန်း,မန္တလေးမြို့ Hot Line-095018457 စေတနာအဓိကပထမ မင်္ဂလာတိုင်းရင်းဆေး ေရႊလယ္ေတာကေဆး(သရက္ကင္းဥ) သရက္ကင္းဥကေရႊလယ္ေတာမွဦးႀကီးမ်ားကပါးပါးလွီးျပီးငါးကင္ပုဇြန္ေျခာက္တို႕နဲ႕သုပ္စားေလ႕ရွိတဲ႔အပင္ရဲ႕ဥျဖစ္ပါတယ္။ ေရေႏြးၾကမ္းနဲ႕အလြန္တြဲဖက္ညီတဲ႕အၿမီးသုပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ဦးႀကီးေတြရဲ႕အိမ္ရွင္မမ်ားကပုဇြန္ကင္၊ငါးကင္တို႕နဲ႕သရက္ကင္းဥကိုေၾကာ္စားငါးပိရည္နဲ႕တို႕စားတတ္ၾကပါေသးတယ္။ဒီလိုစားေပးေတာ႕၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္မျဖစ္ေစပဲေခၽြးတစိုစိုနဲ႕က်န္းမာေစပါတယ္က်ားနႏြင္း၊မုန္နဖူးပင္တို႕နဲ႕ဆင္ဆင္တူေပမယ္႕အရြက္၊ပင္လုံးပင္စည္၊ကပိုႀကီးျပီးဥတက္ေတြကေသးငယ္ပါတယ္။ျဖဴ၀ါေရာင္ဥတက္ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သရက္သီးကင္းနံ႔နဲ႕တူလို႔”သရက္ကင္းဥပင္”လို႕ေခၚႀကပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕ေပါက္ေရာက္ပါတယ္႐ုကၡေဗဒအမည္နဲ႕ Curcuma Amada လို႕ေခၚပါတယ္။Mango Gingerလို႕လဲေခၚပါတယ္။ဂ်င္းမ်ိဳးရင္းမွာပါ၀င္ျပီးနႏြင္းနဲ႕ဆင္တူပါတယ္။ဘက္တီးရီးယားနဲ႕မိႈမ်ားကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္တဲ႕အာနိသင္ရွိပါတယ္။အခ်ဥ္တည္ျခင္း၊သနပ္လုပ္စားျခင္း၊အတို႕အျမဳပ္လုပ္စားျခင္း၊ေဆးအျဖစ္ေဖာ္စပ္ျပီးလည္းသုံးစြဲႀကပါတယ္။ ေအး၊ခါး၊ဖန္အနည္းငယ္စပ္အရသာရွိပါတယ္။ေသြးနဲ႕အဆိပ္သင္႕ျခင္းကိုနိုင္ပါတယ္။သုက္ဓာတ္ပြားေစပါတယ္။၀မ္းမီးေတာက္အစာေႀကေစပါတယ္။မလအညစ္အေႀကးမ်ားကိုစြန္႔ထုတ္ေပးပါတယ္။သလိပ္နာ၊ေခ်ာင္းဆိုးရင္ႀကပ္၊ပန္းနာ၊အဖ်ား၊ထိခိုက္ဒဏ္နာေရာင္ရမ္းျခင္း၊ေလနာရင္ဘတ္နာ၊ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါ၊ဆီးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ယားနာေတြေပ်ာက္ေစပါတယ္သရက္ကင္းဥရင္႕ရင္႕ကိုသၾကားသင္႕႐ုံနဲ႕ျပဳတ္ေသာက္ပါကေသြး၀မ္းေရာဂါ၊ထုံက်င္ကိုက္ခဲတဲ႕ေရာဂါ၊ကိုယ္လက္ေတာင္႕တင္းျခင္း၊ဆီးေၾကာတင္းျခင္း၊အစားပ်က္ျခင္း၊ေလေအာင္႕ျခင္း၊ႏွလုံးမၿငိမ္တဲ႕ေရာဂါ၊မူးေ၀ထိႈင္းမိႈင္းတဲ႕ေရာဂါေတြေပ်ာက္ပါတယ္ … Read more
လေအောင့် လေနာ အမြစ်ပြတ်ပျောက််ဆေးနည်း
လေအောင့် လေနာ အမြစ်ပြတ်ပျောက််ဆေးနည်း လေနာပျောက််ဆေးနည်း ဆားကို မြေအိုးသေးသေးတွင်ထည့်ပြီး စလောင်းဖုံးကိုပက်လက်လှန်ဖုံး၍ နန်းကြိုးဖြင့်တုပ်ပါ။(ဆားထဲသို့ပြာမဝင်စေရန်ဖြစ်သည်) ၎င်းမြေအိိုးကို မီးဖိုထဲတွင်မှောက်၍ဖုတ်ပါ။ တစ်ပတ်ခန့်ကြာမှ ပြန်ဖော်ပြီး ရသောဆားကိုထောင်းပါ။ပုလင်းထဲထည့်သိမ်း၍ ဆန်လွတ်နနွင်း(ဆန်မှုန့်ရောမထားသော နနွင်းစစ်စစ်) စစ်စစ်ဖြင့်ရောသောက်ပါ။ ဆားမန်ကျည်းစေ့ခန့်တွင်နနွင်းမန်ကျည်းစေ့ခန့်ရောပြီးနံက်အိပ်ရာထထချင်းရေအဝနှင့်သောက်ပါ။ လေနာသည်ဖြစ်စေ မနာသည်သည်ဖြစ်စေ တစ်လတိ်တိသောက်ပါက လေနာအမြစ်ပြတ်ပါသည်။ နနွွင်းစွမ်းအင်် နနွင််းသည်ပူ၏ စပ်ရှားရှားအရသာရှိ၏ ခါးသက်၍ ဆိိမ့်သောအရသာအနည်းငယ်ရှိ၏ ကိုယ်ရေနွေးစေ၏ လေကိုနိုင်၏ ဝမ်းမီးကို်တောက်စေ၍ အစာမကြေရောဂါကို်ပျောက်ကင်းစေ၏ ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုပယ်နိုင်သဖြင့် သက်ရှည်ဆေးအဖြစ်ထင်ရှား၏။ နနွွင်းကို ဆားအနည်းငယ်ခပ်၍တစ်နေ့သုံးကြိမ်သောက်လေထိုးလေအောင့်ပျောက်၏။ MyMc ေလေအာင့္ ေလနာ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္္ေဆးနည္း ေလနာေပ်ာက္္ေဆးနည္း ဆားကို ေျမအိုးေသးေသးတြင္ထည့္ၿပီး စေလာင္းဖုံးကိုပက္လက္လွန္ဖုံး၍ နန္းႀကိဳးျဖင့္တုပ္ပါ။(ဆားထဲသို့ျပာမဝင္ေစရန္ျဖစ္သည္) ၎ေျမအိုိးကို မီးဖိုထဲတြင္ေမွာက္၍ဖုတ္ပါ။ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာမွ ျပန္ေဖာ္ၿပီး ရေသာဆားကိုေထာင္းပါ။ပုလင္းထဲထည့္သိမ္း၍ ဆန္လြတ္နႏြင္း(ဆန္မႈန္႔ေရာမထားေသာ နႏြင္းစစ္စစ္) စစ္စစ္ျဖင့္ေရာေသာက္ပါ။ ဆားမန္က်ည္းေစ့ခန္႔တြင္နႏြင္းမန္က်ည္းေစ့ခန္႔ေရာၿပီးနံက္အိပ္ရာထထခ်င္းေရအဝႏွင့္ေသာက္ပါ။ ေလနာသည္ျဖစ္ေစ မနာသည္သည္ျဖစ္ေစ တစ္လတိ္တိေသာက္ပါက … Read more
ထမင်းစားပီးပီးချင်း မလုပ်သင့်သည့် အချက် ၈ချက် ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ အသက်အန္တရာယ်ရှိပြီး လူအများလုပ်မိတတ်တဲ့ အမှား(၈)ချက် ဆိုတာ ဘာတွေလဲ အသက်သေစေနိုင်သည်အထိဖြစ်စေလို့ သတိထားပြီး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်. (၁) ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် စီးကရက် ၁-လိပ်သောက်ခြင်း သည် သာမန် အချိန် စီးကရက်၁၀-လိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ညီ မျှပြီး၊ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာပိုများကြောင်း ဆေးသိပ္ပံပညာရှင် များက သတိပေးထား သည်။ (၂) သစ်သီးများ အလျင်စလို မစားပါနှင့်။ ထမင်းစားပြီးနောက် အချိုပွဲ သစ်သီး စားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အစဉ်အလာ တစ်ခုဖြစ်နေကြပါသည်။ အမှန် အားဖြင့် ထမင်းစား ပြီးပြီးချင်း သစ်သီးစားခြင်းက လေပွစေပြီး၊ အစာအိမ် ကို ဘေးဥပါသ်ဖြစ်စေ၏။ (ထို့ကြောင့်ထမင်းစားပြီးအနည်းဆုံးနာရီဝက်ခန့်ကြာမှသာသစ်သီးစားသင့်ပါသည်။) (ကျန်းမာရေးအမြင်ရှိသောဟိုတယ်ကြီးများနှင့် စားသောက်ဆိုင် … Read more
သင့်အိမ်မှာ အရှင်သီဝလိဆင်းတုတော်ရှိလျှင် သိထားသင့်တဲ့ လောကီပညာလျှို့ဝှက်ချက်များ သင့်အိမ်ရှိ အရှင်သီဝလိဆင်းတုတော်၏ လောကီပညာလျှို့ဝှက်ချက်နှင့် အသုံးပြုနည်း(1) ဒီတခါမှာတော့ နေအိမ်တိုင်းမှာကိုယ်စီကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ထားတဲ့ အရှင်သီဝလိဆင်းတုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လောကီပညာလျှို့ဝှက်ချက်ထဲကမှ ယတြာအစီအရင်ပိုင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောကီပညာ တြိမဏ္ဍလအတတ်ရဲ့ဟိတ်ပညာပိုင်းနဲ့ဓာတ်ပညာအပိုင်းမှာအဓိကစီရင်ထုံးကပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစီရင်နည်းနဲ့အကျိုးသွားကိူ ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ သင့်မှာအကြတ်အတည်းနဲ့စိတ်ညစ်စရာများတဲ့အခါ… အရှင်သီဝလိရုပ်ပွားတော်ထံမှာ စနေနေ့ ည930 မှာ အလင်းတိုင်အဝါနှစ်တိုင်ပူး၊ကြက်လျှာအနီဆယ်လက်ပူဇော်ပါ။ အညံအဆိုးများစိတ်ညစ်ခြင်းများပပျော်သွားပါမယ်။ ဝင်ငွေစီးပွားတိုးတက်လိုတဲ့အခါ…. သောကြာနေ့ မနက်စောစော မှာအရှင်သီဝလိကိုယ်တော်ကို ရည်မှန်း၍ အလင်းတိုင်အဖြူနှစ်တိုင်ပူး၊သစ်သီးဆွမ်း(နှစ်သက်ရာသစ်သီးသုံးမျိုးနှင့်အထက်)ကပ်လျှူပူဇော်ဆုတောင်းယူပါ။မကြာခင်သိသာသောအကျိုးကိူ ခံစားရပါမယ်။ မျက်နှာပွင့်လန်းပြောဆိုစကား အောင်မြင်လိူသော်….. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်စောစောမှာ အရှင်သီဝလိကိူယ်တော်ကို ရည်မှန်း၍ ရုပ်ပွားတော်တွင် မီးတိုင်အနီနှစ်တိုင်ပူး၊သစ်သီးဆွမ်း၊ထီးအနီဆယ်လက် ကပ်လျှူပူဇော်ဆုတောင်းယူပါ။ အကျိုးသွားကို မကြာခံစားရပါမယ်။ ဖော်ပြပါအစီအမံတွေက နေအိမ်မှာပူဇော်ထားတဲ့ မည်သည့်အရှင်သီဝလိဆင်းတုမှာမဆို ဆောင်ရွက်နိူင်ပါတယ်။ အရေးကြီးအနေနဲ့ အစီအမံမဆောင်ရွက်မီ ဘုရားဝတ်ပြူသီလယူပြီး ရုပ်ပွားတော်ရှေ့မှာ မန္တန် သုံးဆယ့်ခုနစ်ခေါက်ရွတ်ရပါမယ်။မန္တန်ကတော့ “ဥုံ … Read more